Afgambi ka dhacay dal ku yaalla Galbeedka Afrika iyo madaxweynihii oo la qabtay - Caasimada Online
Home Warar Afgambi ka dhacay dal ku yaalla Galbeedka Afrika iyo madaxweynihii oo la...
Afgambi ka dhacay dal ku yaalla Galbeedka Afrika iyo madaxweynihii oo la qabtay
Conakry (Caasimada Online) – Cutub ka mid ah ciidamada xulka ee dalka ku yaalla galbeedka Afrika ee Guinea ayaa ku dhaqaaqay afgambi, ayaga oo sheegay inay gacanta ku dhigeen madaxweyne Alpha Conde, islamarkaana ay kala direen dowladdii.
Madaxa ciidamada gaarka ah ee militariga Guinea, Mamady Doumbouya oo hugan calanka Guinea, islamarkaana ay ku hareereysan yihiin sideed askari oo kale, ayaa taleefishinka ka sheegay inay qorsheynayaan inay dhisaan dowlad ku-meel gaar ah, ayna faah-fahain dheeri bixin doonaan goor dambe.
“Waxaan go’aansanay in kadib markii aan gacanta ku dhignay madaxweynaha inaan baabi’ino dowladda,” ayuu yiri Mamady Doumbouya.
Mamady Doumbouya ayaa intaas ku daray in xuduudaha dhulka iyo cirka ee Guinea la xiray.
Diblomaasi reer galbeed ah oo ku sugan Conakry, oo codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in xiisadda ay ka dhalatay kadib markii la eryey taliye sare oo ka tirsan ciidamada gaarka ah – taasi oo dhalisay in qaar ka mid ah askarta sida aad ah u tababaran ay gadoodaan, oo ay qabsadaan madaxtooyada.
Rasaas culus ayaa subaxnimadii Axadda ka qaraxday meel u dhow madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah ee Conakry.